Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ << 1234>> multivarka အတွက်ခရမ်းချဉ်သီးကိုချက်ပြုတ်ရန်ကဘယ်လို ? ခရမ်းချဉ်သီး - ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်တွေအများကြီးဆံ့နှင့်ပင်ကုန်ကြမ်း form ကိုအတွက်အသုံးပြုသည်အလွန်အသုံးဝင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်ဟင်းလျာများပူပြင်းပေမယ့်လည်းအေးမြသာထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့နှင့်အတူအ multivarka အတွက်ခရမ်းချဉ်သီးများအတွက်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများအချို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့။ multivarka ထဲမှာခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူ ခရမ်းချဉ်သီး
ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: ခရမ်းချဉ်သီး -2PCs .
အဘယျသို့လျှင်ခင်ပွန်းအပြောင်းအလဲများကို? မပုန်ကန်မှုပါတဇာတိနှင့်ချစ်ရသူအစဉ်အမြဲဖြတ်သန်းသွားဖို့နာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုများ၏တကယ်တော့အတော်လေးအချိန်ပေါ်မတော်တဆထိခိုက်မှုနှင့်မရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သူမ၏မေးခွန်းကနှောင့်ယှက်ကိုလိမ်လည်လှည့်ဇနီးကပြန်ပြောရမည်ကူညီပေးသည် - ။ ခင်ပွန်းပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်သို့လျှင်, သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆုံးရှုံးနှင့်အတူတကွမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မသကဲ့သို့ မနေ့ကတနင်္ဂနွေဖြုန်းဖို့ဘယ်လောက်, သောကာလအတွင်းအစီအစဉ်များ, ကောင်းတဲ့ညဦး, အရာအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပဲ, ယခုအခါအားလျော်စွာကိုစိတ္တဇနာခြင်း, ကျူးကျော်ဖြင့်အစားထိုးသောမျက်ရည်ကိုစီးဆင်းမှုစမ်းချောင်း, ထိတ်လန့်နေတဲ့ပြည်နယ်။ ဦးခေါင်းကိုအဆက်မပြတ်မေးခွန်းတွေက spinning ဖြစ်ပါတယ်: "ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲ" "အဘယ်ကြောင့်ကျွန်မခင်ပွန်းကိုပြောင်းလဲခဲ့" ။ သူမ၏ခင်ပွန်း၏သစ္စာဖောက်၏လေ့လာသင်ယူပြီးနောက်, မည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုချက်ချင်းလုံလောက်စွာအခြေအနေကအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းရှုံး။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်, နာကျင်မှု, နာကျင်မှတဆင့်, သင်ဆဲသူမ၏ခင်ပွန်း၏အလွန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနားလည်ရန်ရှိသည်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအဓိပ္ပါယ်များရှိနေသော်လည်းသူ့ကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံချင်ခဲ့တာလဲ ဤအမှု၌, ငါတို့ရှိသမျှသည်အမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်းများတွင်အကြံပြုအဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်သူ့ကိုနှင့်အတူတောက်ပသောအရာကိုတစ်ဦးဘဝတွေကိုသဘောပေါက်ကြောင်း, အလှဆုံးဖြစ်မှတဖန်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပါ, sexy အတွင်းခံအဝတ်အစားမဝယ် ။
အဆက်မပြတ်ဆက်ဆံရေးရပ်စဲတောင်းဆိုနေတာ, သူ့ဝုန်းဒိုင်းကြဲလှိမ့်နေကြတယ်ထိုကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာကိုရှေးခယျြသောအပြောင်းအလဲခင်ပွန်းနဲ့, အဆုံး၌, မိမိမေးလ်, တယ်လီဖုန်း, အဝတ်ကိုစစ်ဆေးနေလျှင် အမြိုးသမီးမြား၏အများစုဟာသူ့အခစျြတျောတစျဦး၏သစ္စာဖောက်အကြောင်းကိုသင်ယူ, ဘာလုပ်ရမှန်းနားမလည်ကြဘူး ဒါကြောင့်ညစဉ်ညတိုင်းအပေါ်စစ်ကြောရေးကျေနပ်မှုနှင့်။ ထိုမျှမကသူကလုပ်ရပ်တွေကစီစဉ်ထားသော်လည်းအခြားသောအတွက်သူတို့ရိုးရိုးမဟုတ်တတ်နိုင်သမျှဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေဖွင့်လို့ပဲ။ ရှိသမျှသောဤအမေးခှနျးကိုကူညီမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် - အဘယ်ကြောင့်ခင်ပွန်းအပြောင်းအလဲနှင့်နောက်ဆုံးမှာပြန်သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပေမယ့်ဆန့်ကျင်ပေါ်, တန်ပြန်ဖြစ်ပေါ်စေပါကသင်မှသာသနားခြင်းနှင့်ရွံရှာခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအသငျသညျ, အလှည့်အတွက်, ဒေါသူပုန်ထပါလေအစဉ်အမြဲတုန်လှုပ်လျက်နှုတ်ခမ်းနဲ့မျက်စိနီခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးလုံလောက်သောအမျိုးသမီးတွေဆီကလာခဲ့ပါတယ်။ အခက်ခဲဆုံးဖောက်ပြန်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြီးနောက်မှန်ကန်သောအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ခက်ခဲပြီးသည့်အခါခင်ပွန်းသည်အမှတ်တမဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်သင်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ သို့သော်လည်းဤစမ်းသပ်မှုပြီးမှ, သင်တစ်ဦးချစ်ရသူသို့ပြန်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်, အခြေခံစည်းမျဉ်းများ။ ကိုတစ်သားကောင်မြင်အောင်မနေပါနဲ့ ကျနော်တို့မကြာခဏခင်ပွန်းကိုပြောင်းလဲသည့်အခါသားကောင်ကစားရန်ကြိုးစားပေမယ့်မသှားပါဘူး။ သူမ၏ခင်ပွန်း၏သစ္စာဖောက် - အပြင်, ကိုယ်အဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ခံစားရရန်ဤမျှလောက်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်ခဲ့သည်!
Set တနျး မကျောင်းသို့ပထမဦးဆုံး-တနျးဘိတ်အရေးပါသောကလေးတစ်ဦးရဲ့ဘဝအတွက်အဖြစ်အပျက်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူ့မိဘဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ပျော်စရာရန်နှင့်ထိုသူငယ်ကိုအပ်သူငယ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုကိုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒုတိယအ, မိဘ ပထမဦးဆုံးဂရိတ်တစ်အစုံ, ဒဏ်ငွေမဆိုဘဲမေ့လျော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးအာရုံစိုက်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာမကလေးအားဖြည့်ဆည်းစုဝေးဖို့လိုပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ် ပထမဦးဆုံးဂရိတ်ကျောင်း set ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်မည်သို့အကောင်းဆုံးနားလည်ရန်ကြိုးစားပါနှင့်ရလဒ်သည်ဆိတ်သငယ်နှင့်သူ့မိဘနှစ်ပါးမှအပျော်အပါးအားငါပေးမည်။ ပထမဦးဆုံးဂရိတ်တစ်အစုံ - ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးတွေကိုတင်ပြနေတဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုကအထူးဆုလက်ဆောင်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကျောင်းကသွားလျက်ရှိ၏။ ဒီစုဆောင်းမှု၏ဖွဲ့စည်းမှုကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အများစုရုံးထောက်ပံ့ရေး၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏ၏ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်မိဘများအားလုံးလိုအပ်သောစာရေးကိရိယာကိုဝယ်ခြင်းငှါဤဆုကြေးဇူးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပေါ်မျှော်လင့်ချက်မှားယွင်းကြောင်းသင့်ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကကျောင်းအဝတ်အစားနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဆရာထံမှထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစဆရာမပထမတနျး၏အစုံများတွင်ပါဝင်သည်နှင့်အတူစစျဆေးဖို့ကျိုးနပ်သည်။ ကျောင်းတိုင်းအတွက်, စာရင်းကိုကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, အခြို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းကျောင်းသားအားလုံးများအတွက်ရန်ပုံငွေအတန်းအစား၏ကုန်ကျစရိတ်မှာတနှစ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်နိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်ဝယ်ယူခုနှစ်တွင်ကလေးတစ်ဦးလျော့နည်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေတဲ့, ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလိုအပ်ပါသည်။ ဤအချိန်တွင်မလွှဲမရှောင်သင်တန်းတွေ, အချည်းနှီးသော, ရှေ့တော်၌, ဒါကြောင့်အကောင့်သို့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့် ယူ.
daub မယ့်အစားတစ်လ ပုံမှန်လစဉ် - အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်စစ်ဆင်ရေး၏အဓိက features တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏လှပတစ်ဝက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ရမည့်အစားလစဉ်၏, သံသရာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါဘူးသောအခါအစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်ပေါ်ဖို့?
တစ်ခေါင်းအုံးကိုလျှော်ဖို့ကိုဘယ်လို ? ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးရဲ့အိပ်မက်အတွက်သုံးစွဲအသက်တာ၏ တတိယ။ အရည်အသွေးအအိပ်စက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်အ performance ကိုသာသက်ရောက်သည်။ အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးအပေါ်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးခေါင်းအုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု။ အစပိုင်းမှာအားလုံးကူသင့်အကြိုက်ဆုံးခေါင်းအုံးကိုလျှော်ရန်နှင့်သူကလုယူမှမဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာတစ်နှစ်အကြာတွင်သစ္စာရှိရှိသင်ဝတ်ပြုပေမယ်။ အမွေးခေါင်းအုံး?
ဆီ Burner ကမ်းခြေရာသီနီးကပ်လာ, ထိုကိန်းဂဏန်းဝေးလိုချင်သောပုံစံကနေနေဆဲဖြစ်တဲ့အခါ အမျိုးသမီးများအများစုအပိုက​​ီလိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်အလွန်အရှည်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ intensive အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တင်းကြပ်သောအစားအသောက်များတွင်ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုပြီးသွယ်လျစေရန်တစ်ဦးအတော်လေးအချိန်တိုအတွင်းအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆီ burners တွေက - သို့သော်ခေတ်မီတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အထူးကိရိယာကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အားကစားကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ, မဖြစ်မနေအဆီလောင်ကျွမ်းစေခြင်းအဘို့အ၎င်း၏ဖောက်သည်ထုတ်ကုန်များဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေအားကစားသမားများနှင့်အပျော်တမ်းအဖြစ်ယူနိုင်ပါသည်။ သူတို့နာမအတွက်ထည့်သွင်းအားကစားအဆီ burners တွေကများ၏စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမ - သူတို့ကအမြင်အာရုံလ​​ွှာနှင့်မထိုက်မတန်ကိန်းဂဏန်းစေသည်ခန္ဓာကိုယ်မှအဆီဖယ်ရှားရေးဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေ ။
L-carnitine - မဆိုအဆီ burner တခုခုတဲ့အထူးပစ္စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအားပေးအားမြှောက်မယ့်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသောပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သောပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းဇီဝဖြစ်စဉ်များ၏ပုံမှန်များအတွက် medicament အဖြစ်ဆေးဝါးတွေအတွက်အသုံးပြုသည်။ ထိရောက်သောအဆီ burner တခုခုဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ရသောတက်ကြွစွာသောပစ္စည်းဥစ္စာပါဝင်ပစ္စည်းများမှတပါးပါဝင်သည်။ ခေတ်မီတဲ့အဆီ burners တွေကအုပ်စုနှစ်စုသို့ခွဲခြားထားတယ်: ကို lipotropic ဖြည့်စွက်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ရတဲ့တစ်ကောင်ဆီဥ burner ကိုစွမ်းအင်သို့ခန္ဓာကိုယ်အဆီပြောင်းပေးအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ် ကိုဤအုပ်စုတွင်အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြ၏။ ဒီတက်ဘလက်ဖွဲ့စည်းမှု - အဆီ burners တွေကအစိမ်းရောင်အလက်ဖက်ရည်ထုတ်ယူ, ဖိန်း, Linoleic acid ကိုနှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအဆီဖယ်ရှားရေးကိုအထောက်အကူပြုသောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ Lipotropic အဆီ burners တွေကသူ့ရဲ့အဓိက function ကိုအပြင်, သူတို့လည်းအစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းညှိသောကွောငျ့, အထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကြ၏ဇီဝြဖစ်ပျက်ပုံမှန်, တစ်ရှူးများ၏သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးမှုကိုလှုံ့ဆော်။ ကို thermogenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ အုပျစု၏အဆီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်ပျက်ကိုသက်ဝင်နှင့်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုနေ့စဉ်စားသုံးမှုတိုးမြှင့်။ ဤသူတို့သည်အဆီ burners တွေကအကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်တစ်ဦးဘိုဟိုက်ဒရိတ်-အခမဲ့အစားအသောက်များတွင်ဘာသာရပ်ရှိသည်။ စွမ်းအင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကအဆီနဲ့အဆီ burner တခုခုစီးဆင်းမှု accelerates ။ လောင်ဖို့အစပြုအဖြစ်ခန်ဓာကိုဘိုဟိုက်ဒရိတ်တစ်ဦးအနိမ့်ငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါ
ဒါဟာယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာဗေဒမတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်းလူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်, ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာခြင်း၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော tools တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအ ဆက်စပ်.
မည်သို့မကြာခဏခရမ်းချဉ်သီးကိုစိုစေသလော အဲဒါကိုခရမ်းချဉ်သီးကိုစိုစေမှလိုအပ်သောသည်မည်မျှမကြာခဏသိရဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်သိလား, ဒါကြောင့်သူတို့မနာဘူး, အစိုဓာတ်မရှိခြင်းကနေမခံသနည်း ဤအသိပညာ၏လယ်သမားတစ်ဦး၏ရရှိမှုသည်သူ၏အနာဂတ်စပါးရိတ်ရာကာလမူတည်!
1 &nbsp;2&nbsp;3&nbsp;4&nbsp;   &nbsp; >> &nbsp;       အဆိုပါ site ကိုပစ္စည်းများကိုပုဂ္ဂလိကစုဆောင်းခြင်းသည်နှင့်